Inkcazo kunye nemizekelo
Sayensi IMithetho yeMichiza
Qonda ukuba yeyiphi indlela ehambelanayo kwiKhemistry
Ukuqhagamshelana kubhekiselele kwinto ehambisanayo okanye efana nayo yonke ixabiso layo. Isampuli esithathwe kuyo nayiphi na inxalenye yesilwanyana esifanayo iya kuba neempawu ezifana neesampuli ezithathwe kwenye indawo.
Imizekelo: Umoya uthathwa njengomxube ofanayo weegesi. Ityuwa elungileyo linomxholo ofanayo. Ngomlinganiselo oqhelekileyo, iqela labantwana besikolo bonke abagqoke kwifomu efanayo baya kuthathwa njengento efanayo.
Ngokwahlukileyo, igama elithi "hterogeneous" libhekisela kwizinto ezinomsebenzi ongaqhelekanga. Umxube weeaple kunye nee-orangesi. Ibhakethi yamatye liqule umxube we-shaterogeneous of shapes, size, and composition. Iqela lezilwanyana ezahlukeneyo ze-barnyard lixhomekeke. Umxube weoli kunye namanzi unobuncwane ngoba izilwanyana ezimbini azidibanisi. Ukuba isampuli ithathwa kwenye inxalenye yomxube, ingaba nexabiso elilinganayo leoli kunye namanzi.
Incaous Definition (i-Aqueous Solution)
Ziziphi ezinye zeModeli zePolymers?
Inkcazo ye-Electrolyte engenamandla kunye nemizekelo
Inkcazo yeNgcaciso yeFat kunye nemizekelo
Inkcazo yeNkcazo kunye neMimiselo (iKhemistry)
Iingcaciso zeGesi kunye nemizekelo (iChemistry)
Isisombululo sobunzima besichazi
Ulawulo lweMadelung Inkcazo
Inkcazo yeDinemagnetic kunye neDiagnnetism
Amaqonga e-Van der Waals Inkcazo
INkcubeko yaseKorea yaseKhaya yeMidlalo
I-Orders ye-Obama yoLawulo ayikho ngokwenene into oyicingayo
Ukuhlawula iindaba zeMoya ze-Eastern State Penitentiary
Iintlobo zeKhafi Ekhonza eItali
Ikholeji yaseMorem yoBugcisa boBugcisa boBugcisa
Indlela yokukhetha i-Best Philosophy Graduate Programme
Iintlobo zeziganeko zeMkhukula kunye nezizathu zazo
Ukuqonda imeko yelifa kwi-College admissions
Iilwimi zesiTshintsho zesiFrentshi
Ukuqhathanisa i-AIS ye-Boating Apps: I-Finder ye-Ship, i-Traffic Marine, iBetac Beacon
Iingcebiso ezi-7 zokuqalisa iReiki Practice
Ukugqithisa okungekho phantsi kokuveliswa
I-5 Building Common Building Building
Phezulu 5 Kendrick Lamar "Ulawulo" Iimpendulo
Imikhono okanye ii-Wetsuits ezingenamikhono ze-Triathlon Swimmer?
Indlela yokudibanisa "Obéir" (ukuthobela) ngesiFrentshi
Prioridades deportación por orden I-Trump y reglas i-expulsión inmediata
Imizobo yentetho: Inkcazo kunye nemizekelo
Iimnandi zokungazi kakuhle nguRobert Lynd